I-china Zmte isongelwe isaphulelo sombhobho wamanzi esenziwa kunye nefektri Topa
I-Zmte isongelwe ithumbu le-hydraulic
Umzekelo No .: R15
Izinto: Abicah ngerabha, PP
Ukuvavanya ulwazi: Ubushushu ngerabha Hose
Umbala: Mnyama, Mnyama / bomvu / bhlowu / tyheli
Ubushushu: -30 Ukuya kwi-90 Degree
Ubude: 2m / 50m Okanye ngokweeMfuno zakho
Inombolo yomzekelo: Ububanzi obahlukeneyo
Umbhobho ofanelekileyo: Ububanzi obungama-8-10 Mm
Tube yangaphakathi: Resistant oyile
Ukusetyenziswa: Khusela umbhobho
Isiqinisekiso: I-ISO9001: 2008
Igama: Isaphulelo Hydraulic Hose
Packaging: ibhokisi kunye netyala leplanga
Imveliso: Ningbo, Shanghai, Tianjin
Amandla okubonelela: Ningbo, Shanghai, Tianjin
Isiqinisekiso: Ngesanti kubunzulu baphantsi Hose ISO
Izibuko: Ningbo, Shanghai, Tianjin
I-Zmte isongelwe isaphulelo Ngesanti kubunzulu baphantsi Hose
Ithumbu lesaphulelo se-hydraulic lisetyenziswa ikakhulu kwinkxaso yemigodi ye-hydraulic, ukukhangela ioyile, kufanelekile kulwakhiwo lobunjineli, ukuhambisa i-crane, ukwenza isinyithi, izixhobo zemigodi, iinqanawa, oomatshini bokubumba inaliti, oomatshini bezolimo izixhobo ezahlukeneyo zomatshini.
Ngesaphulelo umbhobho ngesanti kubunzulu baphantsi - Umbhobho wangaphakathi
Isiseko seerabha eyenziweyo enganyangekiyo neeoyile.
Ngesaphulelo umbhobho ngesanti kubunzulu baphantsi - Ukomeleza
Umtshakazi o-1 wentsimbi enganyangekiyo, i-2braide kwaye ene-spiral ezine
Ngesaphulelo umbhobho ngesanti kubunzulu baphantsi -Ukugquma
Irabha emnyama eyenziweyo enganyangekiyo kurhoxiso, i-oyile, amafutha, i-ozone, iiarhente zomoya.
ukusuka -40 ° C ukuya kuthi ga + 100 ° C
Isazisi sombhobho Umbhobho OD Uxinzelelo lokusebenza Uxinzelelo oluPhezulu Ubuncinane bend Radius Ubunzima
intshi mm mm MPHA IPsi MPHA IPsi mm kg / m
Ngesaphulelo umbhobho ngesanti kubunzulu baphantsi isetyenziselwe ukuhambisa umbane wamanzi onje ngeoyile ye-hydraulic, ioyile yeoyile, ukuthambisa, i-emulsion yamanzi, i-hydrocarbon kunye nonyana ukuze kuhanjiswe uxinzelelo oluphezulu lwamanzi kunye nokuguqula i-hydraulic kwiprojekthi yobunjineli ubushushu obungu -40 ℃ ~ + 100 ℃.
Inkampani yethu inezixhobo eziphambili ezithe zangeniswa zivela eMzantsi Korea, eFinland nase-Itali, kubandakanya umatshini wokujikeleza, umatshini wokuluka, umatshini wokugoba kunye nezinye izixhobo zemveliso. Kanye nokuma kovavanyo lokuma, ukuma kovavanyo lwempembelelo kunye nezinye izixhobo zokuvavanya.
Sivelisa iimveliso ezihlangabezana nemigangatho yamazwe ngamazwe ye-SAE kunye ne-DIN esemgangathweni ophezulu. Iimveliso zithengisiwe kwiindawo ezahlukeneyo kubandakanya iindawo zeoyile, amashishini emigodi, isinyithi, ubunjineli kunye noomatshini. Icandelo ziye zithunyelwa eMelika, eRashiya, Canada, Argentina nakwamanye amazwe amaninzi.
Iphakheji ngokubanzi ka-discount hydraulic umbhobhoYiplastiki okanye ibhegi ephothiweyo enephalethi phantsi kwethumbu, elinokubonwa ngezantsi. Thina, nangona kunjalo, sinokubonelela ngeephakeji ezizodwa ngokwezicelo zabathengi.
Eyethu discount hydraulic umbhobho ziveliswa ngokungqongqo ngokungqinelana nemigangatho yesizwe.
Sebenzisa irabha ekumgangatho ophezulu, i-liner yangaphakathi inokungenelela komoya okuhle, kwaye isiciko sinokusebenza okungafunekiyo kokulwa nobushushu.
Umaleko wokuqiniswa kwe-2 wenziwe ngokuluka (okanye ukujija) ngentambo ye-polyester enamandla amakhulu.
Ubushushu 3.Working: -40 ℃ -160 ℃
Umgangatho omiselweyo: i-GB / T25
5.Yimeko-bume, akukho lungcoliseko kwindalo esingqongileyo.
6. abe iSebe lakhe Technology,
7. yamkela i-OEM
Isampula kunye nomyalelo wokuvavanywa ziyafumaneka
1. Ngaba i-OEM iyafumaneka?
Ewe, i-OEM iyafumaneka. Sinobuchule bokuyila ukunceda ukunyusa uphawu lwakho.
2. Ngaba isampulu iyafumaneka?
Ewe, iisampulu ziyafumaneka ukuze uvavanye umgangatho ukuba sinesampulu kwindawo yokugcina izinto, imithwalo ingahlawulwa ecaleni kwakho
3. Ngaba unguMvelisi?
100% umenzi, Wamkelekile undwendwele umgca wethu wemveliso.
4. Leliphi ixesha eliqhelekileyo lokuhlawula ii-odolo?
T / T 30% njengoko idipozithi, kunye T / T 70% eseleyo ihlawulwe phambi kokuba kulayishwe.
Okanye naliphi na ixesha lokuhlawula ukuxoxa.
Uqhagamshelana njani nathi?
Sijonge esona siphumlisi seHydraulic Hose yoMvelisi kunye nomthengisi? Sinokhetho olubanzi kumaxabiso amahle ukukunceda ufumane ubuchule bokuyila. Zonke iZmte Discount Hydraulic Hose ziqinisekisiwe ngomgangatho. Siyi-China Origin Factory yeHold Hydraulic Hose. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Iindidi zeMveliso: Umbhobho weHydraulic
Egqithileyo Ukukhanya kwe-300bar ye-25mm ye-manometer yecomputer yePCP
Okulandelayo: 16711 Stainless umbhobho izixhobo brake waqhekeza
Irabha umbhobho bhetyebhetye parker ngamanzi umbhobho kunye ...
Umgca ipetroli / amafutha koxinzelelo oluphezulu umbhobho ngesanti kubunzulu baphantsi p ...
Yenziwe ngentsimbi eshayinayo ngenxa yoxinzelelo oluphezulu lwehydrauli ...
Ubushushu obugudileyo obumphezulu wombhobho werabha
Uxinzelelo oluphezulu irabha umbhobho ngesanti kubunzulu baphantsi